ခွေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ခွေး သည် လူသားတို့၏ ယဉ်ပါးအောင် မွေးမြူခြင်းခံရသည့် ပထမဆုံး အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လူတို့၏ မိတ်ဆွေစစ် ရှေးကျောက်ခေတ်ကတည်းက လူတို့သည် ခွေးကို မွေးမြူခဲ့ကြသည်။ ခွေးသည် သခင်ကို သစ္စာဖောက်၍ စွန့်ပစ်လေ့ မရှိချေ။ သခင်အတွက် အသက်ကိုပင် စွန့်တတ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခွေးအမျိုးမျိုးရှိရာ ယင်းတို့၏ တစ်မျိုးစီ အသုံးကျပေသည်။
လူတို့မွေးမြူအသုံးပြုသော တိရစ္ဆာန်များအနက် ခွေးသည် အားအကိုးရဆုံးသော မိတ်ဆွေ၊ သစ္စာ အရှိဆုံးသော ကျေးကျွန် မည်ပေသည်။ ရှေးကျောက်ခေတ်က လူတို့နေထိုင်ရာ ဂူလိုဏ်များကို တူးဖော်ကြည့်ရာတွင် လူရိုးနှင့် ခွေးရိုးများ အတူတကွ တွေ့ရှိခြင်းကို ထောက်ရှုသော် သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်အခါကပင် ခွေးသည် လူတို့အတွက် ယဉ်ပါးလာသောတိရစ္ဆာန် ဖြစ်၏ဟု ဆိုရပေမည်။ အိမ်ခွေးတို့သည် ဝံပုလွေနှင့် ခွေးအများ အထူးသဖြင့် ဝံပုလွေများမှ တစ်စတစ်စ ဆင်းသက်လာသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယုံကြည်ယူဆကြသည်။ ယင်းသိပ္ပံသုတေသီတို့၏ အဆိုအရ ရှေးခေတ်လူတို့သည် ရှေးဦးစွာ မိမိတို့ဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝံပုလွေအရိုင်းများကို အမဲလိုက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် မွေးမြူကြသည်။ ထို့နောက် လူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အမဲလိုက်ရန်တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ သီးခြားကိစ္စအလိုက် မွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရာမှ အိမ်ခွေးအမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
အိမ်ခွေးများသည် လူတို့နှင့်အတူ နေထိုင်ယဉ်ပါးနေပြီဟု ဆိုရသော်လည်း မိမိတို့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်မှ မျိုးရိုးဇာတိစရိုက် အချို့ကိုမူ ယနေ့တိုင်အောင် မဖျောက်နိုင်ကြသေးပေ။ ခွေးသည် မွေးစအရွယ်မှစ၍ အမဲလိုက်ရန် ဝါသနာထုံခဲ့သည့်အတိုင်း အငယ်ဆုံးသော ခွေးကလေးမျိုးပင်ဖြစ်စေကာမူ ပြေးလွှားနေ သည့်ကြက်၊ ငှက်၊ ကြွက်၊ ကြောင်မှစ၍ ယုန်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ သမင်၊ ဒရယ်၊ ချေ၊ ဆတ် စသည်တို့ကို မြင်ရုံနှင့် အပြေးလိုက်တတ်သည်။ ခွေးသည် အိပ်ခါနီး နှစ်ပတ် သုံးပတ်လှည့်ပြီးမှ အိပ်တတ်သည်။ ဤအကျင့်မှာ ရှေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သော မျိုးရိုးဇာတိစရိုက်ပင် ဖြစ်၏။ မယဉ်ပါးသေးသော အချိန်က ခွေးရိုင်းများသည် လုံခြုံသော ကိုင်းတော မြက်တောများ၌ အိပ်ရန်ကြံသောအခါ အိပ်မည့်နေရာရှိ မြက်နှင့် သစ်ရွက်များကို ပထမ သုံး၊ လေးပတ်မျှ လှည့်၍ နင်းပေးပြီး အိပ်ရာနေရာကို ပြင်လေ့ရှိသည်။ ညဖက်တွင် ခွေးများအူတတ်သည့် အကျင့်မှာလည်း ယင်းတို့၏ မျိုးရိုးဖြစ်သော ဝံပုလွေများသည် အစာရှာထွက်ချိန်၌ ဝံပုလွေအုပ်ကို အူ၍ ခေါ်သော အလေ့မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ခွေးများသည် မည်သည့်ရန်သူမျှ မရှိစေကာမူ မိမိတို့၏ အစာဖြစ်သော အရိုးများကို ဝှက်ထားတတ်သည်။ ဤအကျင့်မှာလည်း ရှေးခွေးရိုင်းများသည် မိမိတို့၏အစာကို ရန်သူ မတွေ့နိုင်အောင် ဝှက်ထားတတ်သည့် အလေ့မှ ဆင်းသက်ခဲ့ပေသည်။ ထိုမှတစ်ပါး အနံ့ခံ ကောင်းခြင်း၊ မျက်စိရှင်ခြင်း၊ နားပါးခြင်း၊ ချွန်ထက်သော သွားများရှိခြင်း၊ ပြေးလွှားနိုင်ရန် သန်စွမ်းသော ခြေထောက်များရှိခြင်း၊ ကိုယ်တွင် အမွေးကြမ်းများ ဖုံးလွှမ်းပါရှိခြင်း၊ သေးသွယ်၍ ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်း သောကိုယ် ရှိခြင်း စသည်တို့မှာလည်း မုဆိုးများနှင့်အတူ အမဲလိုက်ရာ၌ သင့်တော်အောင် သဘာဝက ဖန်တီးပေးခဲ့သော ရှေးခွေးရိုင်းများမှ ဆက်ခံခဲ့သည့် မျိုးရိုးဇာတိအမွေများပေတည်း။ ခွေးတို့သည် လူသားတို့လက်ဖြင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းခံရသည့် တစ်ခုတည်းသော မျိုးစိပ်ပင် ဖြစ်သည်။ 
အာရှနှင့် အာဖရိကတိုက်ရှိ အမဲလိုက်ခွေးရိုင်းများနှင့် ယဉ်ပါးနေသော အိမ်ခွေးများ၏ ခြားနားချက် တစ်ခုမှာကား များသောအားဖြင့် အိမ်ခွေးများက ဟောင်တတ်၍ ခွေးရိုင်းများက အူရုံသာ အူတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အမေရိကတိုက်ရှိ ဝံပုလွေနှင့်တူသောခွေးများသည် တစ်ခါတစ်ရံသာ ဟောင်တတ်သည်။ အက်စကီးမိုး လူမျိုးတို့ မွေးမြူထားသော 'ဟပ်စကီ' ခေါ် ခွေးများကမူ လုံးဝမဟောင်တတ်ချေ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိရစ္ဆာန်မျိုးအားလုံးတွင် ခွေးတစ်မျိုးတည်းသာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ လူနှင့်အမြဲ လိုက်ပါကာ အမျိုးမျိုးသော ရာသီဥတုကို ခံနိုင်၍ လူအား ကူအညီပေးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ အချို့သောခွေးမျိုးသည် ရဲရင့်သည်။ အချို့မှာ သိမ်မွေ့၏။ အချို့ကား လိမ်မာ၏။ အချို့ကား ထိုင်းမှိုင်း၏။ ဆိုးပေ၏။ သို့သော် အားလုံးသော တိရစ္ဆာန်များအနက် ခွေးသည် လူ၏သဘောကို နားအလည်ဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ခွေးသည် ဝံပုလွေမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ဖွယ် ရာ အကြောင်း ရှိလေသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက် မြောက် ပိုင်းရှိ အက်စကီးလူမျိုးတို့၏ခွေးများသည် ဝံပုလွေနှင့် အလွန် တူသည်။ ပကတိဝံပုလွေနှင့် တူလှသောကြောင့် မကြာခဏပင် ခရီးသည်များ အထင်မှားကြရသည်။ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိ ခွေးအချို့မှာလည်း ဝံပုလွေနှင့် ရွေးမရအောင် တူသည်။ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် ဥရောပတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများရှိ အိမ်ခွေးများမှာမူ ခွေးအတို့၏ အဆက်အနွယ်များ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ အမေရိကနှင့် ဥရောပတိုက်မြောက်ပိုင်းရှိ အက်စကီးမိုး ခွေးများကို ရေခဲပြင်ပေါ်၌ စွတ်ဖားဆွဲရန် အသုံးပြုကြသည်။
ဝင်ရိုးစွန်းရှာဖွေသူတို့သည် ဤခွေးများ၏အကူအညီကို များစွာ ရရှိကြသည်။ ယင်းတို့သည် အလွန်အမင်း အေးသောဒဏ်ကို ခံနိုင်၍ အစာအာဟာရ အနည်းငယ်ဖြင့် အသက်ရှင်နေနိုင်ကြ သည်။ အားကောင်းသော ဤခွေးမျိုးတစ်စုသည် ခရီးလမ်း ကောင်းမွန်ပါက ရေခဲပြင်ပေါ်၌ ပေါင်ချိန် ၃၆၀ ရှိသောဝန်ကို တစ်နေ့လျှင် မိုင် ၄၀ ခန့် ခရီးပေါက်အောင် လွယ်ကူစွာ ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
ဗဲလဂျီယမ်နှင့် ဟော်လန်နိုင်ငံများတွင် လက်တွန်းလှည်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လှည်းနှင့် နွားနို့လှည်းကလေးများကို သန်စွမ်းသောခွေးများအား ဆွဲစေသည်။
စကော့တလန်ပြည်၌ အလွန်စိတ်ချ အသုံးဝင်သော သိုးကျောင်းခွေးများ ရှိသည်။ ချွန်သောနှုတ်သီးနှင့် အမွေး ထူထပ်သော ကိုယ်ရှိပြီးလျှင် လည်ပင်းနှင့် အမြီးတွင် လည် အမွေးဖွားဖွား ပါရှိသဖြင့် အထူးပင် လှပသည်။ ဤခွေးများသည် မျက်စိလည် လမ်းမှား၍ အုပ်ကွဲသွားသောသိုးများကို သိုးအုပ်ရှိရာသို့ ပြန်ပို့ပေးခြင်း၊ နေဝင်ချိန်၌ သိုးများကို စုရုံး၍ ခြံသွင်းခြင်း စသည့် သိုးကျောင်းအလုပ်များကို လူနှင့်မခြား ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အနံ့ခံလည်းကောင်းလှသဖြင့် အုပ်ကွဲနေ သောသိုးများကို ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းများကြားထဲမှပင် မရမနေ တွေ့အောင် ရှာဖွေနိုင်ကြသည်။
အမဲလိုက်ခွေးမျးသည် အမဲကောင်ကို အနံ့ခံ၍ မျက်ခြည် မပြတ်အောင် လိုက်နိုင်သည်။ သွေးစက်ကို အနံ့ခံလိုက်၍ ထိမှန်သွားသောအမဲကောင်များကို တွေ့အောင် ရှာနိုင်သည်။ ခြေရာခံခွေးကြီးများသည် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားသော ရာဇဝတ်သားများကို ခြေရာခံ၍ လိုက်လံဖမ်းဆီးပေးနိုင်သည်။ ဥရောပတိုက်အလယ်ပိုင်းရှိ မြင့်မား၍ ဆီးနှင်းများ ဖုံးအုပ် နေသည့် အဲ့လပတောင်တန်းများပေါ်တွင် သွားလာကြသော ခရီးသည်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ မျက်စိလည်လမ်းမှား၍ ဖြစ်စေ၊ ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းမိ၍ ဖြစ်စေ၊ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျကာ အတိဒုက္ခရောက်နေတတ်သည်။ ထိုဒုက္ခသည်များအား လိုက်လံ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရန်အတွက် 'စိန်ဗားနတ်'ခေါ် ခွေးကြီးများကို တောင်ခြေရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၌ မွေးမြူ လေ့ကျင့်ပေးထားကြသည်။ ရာသီဥတု ဆိုးရွားသောနေ့များတွင် ဤခွေးကြီးများကို လည်ပင်း၌ ခေါင်းလောင်း ကလေးများဆွဲကာ ဒုက္ခ သည်များအား ရှာဖွေရန် စေလွှတ်လိုက်သည်။ အများအားဖြင့် နှစ်ကောင်တွဲ စေလွှတ်လေ့ ရှိ၏။ ဒုက္ခသည် တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို တွေ့သောအခါ တစ်ကောင်က အကူအညီ ပေးရရန် ဘုန်းကြီးများထံ ပြန်ပြေး၍ ကျန်တစ်ကောင်က ဒုက္ခသည်အား ဖုံးနေသော နှင်းခဲများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ အနွေးဓာတ်ရစေရန် မျက်နှာနှင့် ခြေလက်များကို လျှာဖြင့် လျက်ပေးခြင်းဖြင့် စောင့်ရှောက်ကာ ကျန်ခဲ့သည်။
၄ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အတွေ့ရများသော ခွေးများ
၅ ခွေးများ စားတတ်သည်နှင့် မစားတတ်သည့် အစာများ
ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းက စိန်ဗားနတ်နှင့် အခြားခွေး မျိုးများအပါအဝင် ခွေးပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်တို့သည် စစ် မြေပြင်၌ အရေးကြီးသော အလုပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြ လေသည်။ တယ်ရီယာ ခွေးငယ်ကလေးများက မြေကတုတ် အတွင်းရှိ ကြွက်များကို နှိမ်နင်းပေးခဲ့သည်။ သန်မာထွားကျိုင်း သော ခွေးကြီးများက ကင်းစောင့်စစ်သားများထံ ပူနွေးသော စားသောက်ဖွယ်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ လူမသွားနိုင် လောက်အောင် ဘေးရန်ပေါသော နေရာများသို့ စစ်သတင်းများ ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ သူနာပြုခွေးများက ကြက်ခြေနီ သူနာပြုတပ်သားများအား ဒဏ်ရာဖြင့်လဲနေသော စစ်သား များထံသို့ ရောက်အောင် လမ်းပြပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကလည်း အထက်ပါကိစ္စများ အပြင် ကင်းစောင့်ခြင်း၊ စစ်ပစ္စည်း စစ်စခန်းများ စောင့်ထိန်း ခြင်း၊ မြေမြှုပ်ဗုံးများ ရှာဖွေခြင်း စသည့် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွေးပေါင်းမြောက်မြားစွာကို လေ့ကျင့် အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကင်းစောင့်ခွေးများသည် စစ်သားတို့ထက် ဦးအောင် ချဉ်းကပ်လာသော ရန်သူကို အနံ့ဖြင့် သိရှိကြသည်။
အက်စကီးမိုးတို့၏ ဟပ်စကီခွေးမျိုးနည်းတူပင် အိမ်စောင့် ရာ၌ အထူးအားကိုးရသည့် 'ဂရိတ်ဒိန်း'ခေါ် ခွေးကြီးမျိုးနှင့် 'ခွေးဘီလူး'များလည်း ရှိသေးသည်။ ခွေးဘီလူးသည် မက်စတစ်မျိုးတွင် ပါဝင်၍ အရုပ်ဆိုးသလောက် စည်းကမ်း သေဝပ်ပြီးလျှင် သစ္စာရှိပေသည်။ သတ္တိအလွန်ကောင်း၍ ကိုက်မိလျှင် မလွှတ်တမ်း ခဲထားလေ့ရှိသဖြင့် ခွေးဘီလူးများကို ရှေးအခါက တောဝက်လိုက်ရာ၌၎င်း၊ ခွေးနှင့်နွား တိုက်ပွဲများ ၌၎င်း အသုံးပြုခဲ့ဘူးသည်။
ခွေးများသည် အနံ့ခံအကောင်းဆုံးခွေးမှာ အမဲလိုက်ခွေး များပင် ဖြစ်၏။ အမဲလိုက်ခွေးမျိုးတို့သည် အပြေးမြန်သည်။ အထူးသဖြင့် ခွေးသမင်မျိုးမှာ အပြေးအလွန်မြန်၏။ မြေခွေး လိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ခွေးမျိုးမှာလည်း အလွန်လှပ၍ ယင်းတို့ကို အင်္ဂလန်ပြည်၌ အုပ်လိုက် မွေးမြူကာ အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
ကမ္ဘာတွင် ယဉ်ပါးနေသော ခွေးမျိုးသန့်သန့်ပေါင်း ၂၂၅ မျိုးခန့်ရှိ၍ ယင်းတို့အနက် ၂၅ မျိုးခန့်မှာ အကြီးမျိုးထဲက ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အသိအမှတ်ပြုထားသော ခွေးများကို တစ်ဖန် အမျိုးအစားအလိုက် ၆ စု ခွဲထားပြန်သည်။
ပထမအစုမှာ ဝံပုလွေနှင့်တူသည့် ခွေးဝံပုလွေမျိုး ဖြစ်၍ ဤအစုတွင်
အက်စကီးမိုးတို့၏ ခွေးများ၊ အမေရိကတိုက်မှ ခွေးဝံပုလွေများ၊ သိုးကျောင်းခွေးများ၊ တရုတ်တို့၏ 'ချောင်ချောင်'ခေါ် ခွေးများ နှင့် အထက်ကျော်ကာလက ဗဲလဂျီယမ်နိုင်ငံ၌ လှေများကို စောင့်ပေးသော အမြီးမပါသည့် 'စခစ်ပါကီ' ခွေးမျိုးများ ပါဝင်သည်။
ဒုတိယအစုမှာ ခွေးသမင်မျိုးဖြစ်၍ ဤအစုတွင် နိုင်ငံ
အရပ်ရပ်မှ ခွေးသမင်အမျိုးမျိုး၊ အိုင်ရစ်နှင့် ရုရှဝံပုလွေခွေး သမင်များအပြင်၊ တောင်အမေရိကတိုက်၊ မက္ကဆီကိုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမွေးမပါသည့် ထူးခြားသော ခွေးသမင်မျိုးတို့ အားလုံးပါဝင်သည်။
တတိယအစုမှာ စပန်နီယယ်ခေါ် သင်္ဘောခွေးမွေးရှည်မျိုး
ဖြစ်၍ ဤခွေးမျိုးတွင် အမွေးရှည်ခြင်း၊ ခေါင်းကြီးခြင်း၊ နားရွက်ဖားခြင်းတို့၌ အခြားခွေးမျိုးများနှင့် ကွဲပြားသည်။ ဤအစုတွင် 'နယူးဖောင်းလန်း'ခွေးများ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ 'ပီကင်းဂိ'ခွေးမျိုးနှင့်တကွ ငှက်ပစ်ထွက်ရာတွင် လိုက်လေ့ ရှိသော တောလိုက်ခွေးအမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။
စတုတ္ထအစုမှာ အမဲလိုက်ခွေးမျိုး ဖြစ်၍ ဤအစုတွင်
မြေခွေးလိုက်ခွေး၊ ဖျံလိုက်ခွေး၊ ဆတ်လိုက်ခွေး စသော အမဲလိုက်ခွေးအမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။
ပဉ္စမအစုမှာ မက်စတစ်ခေါ် အိမ်စောင့်ခွေးကြီးမျိုးဖြစ်၍
ဤအစုတွင် ဂရိတ်ဒိန်း ခွေးကြီးမျိုး၊ စိန်ဗား နတ်ခွေးကြီး မျိုးနှင့် ခွေးဘီလူးများ ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့သည် သစ္စာရှိ၍ သတ္တိကောင်းသဖြင့် အလွန်စိတ်ချရ၏။
တယ်ရီယာခေါ် မြေတူးခွေးမျိုး ဖြစ်သည်။
မြေတူးခွေးမျိုးဟု ခေါ်ရခြင်းမှာ ကြွက်စသော တွင်းအောင်း သတ္တဝါများကို လိုက်လံဖော်ယူတတ်သောအလေ့ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဤခွေးမျိုးသည် ဉာဏ်ကောင်းသည်။ လိမ်မာသည်။ လှလည်းလှသဖြင့် အလှမွေးခွေးလိမ္မာများအဖြစ်ဖြင့် လူကြိုက် များသည်။ ဤခွေးမျိုးတွင် စကော့တယ်ရီယား အိုင်ရစ်တယ် ရီယာ၊ အဲယားဒေးတယ်ရီယာ၊ ယော့ရှိုင်ယာတယ်ရီယာ၊ စံကိုင်း တယ်ရီယာ စသော တယ်ရီယာအမျိုးမျိုးအပြင် 'ပူးဒဲ'ခေါ် အလိမ်မာဆုံးဖြစ်သည့် ခွေးလည်ဆံရှည်မျိုးလည်း ပါဝင်သည်။ အထက်ပါ ခွေးမျိုးသန့်များအပြင် အလိုရှိသောခွေးမျိုးရ အောင် မျိုးကွဲချင်း စပ်ထားသော ခွေးမျိုးစပ်များလည်း ရှိ သေးသည်။ ခွေးမျိုးစပ်(ဝါ)ဗန္ဓတ်ခွေးတို့သည် ခွေးမျိုးသန့် တို့လောက် တန်ဖိုးမများပေ။ သို့သော် များသောအားဖြင့် အလွန်လိမ္မာ ဉာဏ်ကောင်းတတ်၍ ယင်းတို့၏သခင်များအဖို့ အဖော်လည်း ရတတ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် မည်သူကမှ မပိုင်၊ တန်ဖိုးလည်းမထား သော ခွေးဝင်စားခေါ် အလေ့ပေါက်ခွေးများ ရှိသည်။ ယင်းတို့ ကို အထူးသဖြင့် ဥရောပတိုက်အရှေ့ပိုင်း၊ အာရှနှင့် အာဖရိက တိုက်တို့၌ ပေါများစွာ တွေ့ရသည်။ အိမ်ကြိုအိမ်ကြားများ တွင် နေထိုင်ကာ တွေ့ရာကို ရှာဖွေစားသောက်ကြ၏။ ဤ ခွေးလေများကြောင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ပြန့်ပွားလေ့ ရှိသည့်အတိုင်း နိုင်ငံကြီးများ၌ ခွေးပိုင်ရှင်တို့သည် ခွေးများကို အစိုးရထံ အခွန်ဆောင်ရသော လိုင်စင်ဖြင့်သာ မွေးမြူနိုင်ပေ သည်။ ခွေးမှ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများအနက် အထူးသဖြင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အတွေ့ရများသော ခွေးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အတွေ့ရများသော ခွေးများမှာ ခွေးဝင်စားများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုခွေးဝင်စားများအပြင် နိုင်ငံခြားခွေးမျိုးများကိုလည်း မွေးမြူတတ်ကြ၏။ နိုင်ငံခြားခွေးများနှင့် မြန်မာခွေးများ စပ်ရာမှ ပေါက်ပွားလာသော ခွေးဗန္ဓတ်မျိုးများလည်း ရှိသေးသည်။ မြန်မာတို့ မွေးမြူလေ့ရှိသော ခွေးမျိုးများမှာ သင်္ဘောခွေး၊ အင်းခွေး၊ ကမာဘီ၊ ခွေးသမင်၊ ပွေလီ၊ ခွေးဘီလူး စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင် ချင်းခွေးမျိုးဖြစ်သော ခွေးပုကလေးများကိုလည်း အလှမွေးမြူတတ်ကြသည်။
အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပတိုက်ရှိ အချို့နိုင်ငံများတွင် ခွေးများကို ဂရုတစိုက် မွေးမြူကြသည်။ အသင်းအပင်းများ ဖွဲ့စည်း၍ ပြပွဲပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပကာ အမျိုးမျိုး အားပေးကြသည်။ ခွေးသမင်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ အချို့နိုင်ငံ၌ မြင်းပွဲတစ်မျှပင် ခေတ်စားလျက်ရှိပေသည်။
ခွေးသည် အလွန်အားကိုးရသည်။ အလွန်လိမ်မာသည်ဟုဆိုသော်လည်း ကျွေးမွေးထားရုံနှင့် မလိမ်မာချေ။ ခွေးမွေးလိုသူတို့သည် ရှေးဦးစွာ မိမိတို့အလိုရှိသော ခွေးမျိုးသန့်သန့်ကို ရွေးချယ်၍ လသားအရွယ်က စတင်မွေးမြူသင့်သည်။ ထို့နောက် ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပြုစု၍ ပြောစကား နားလည်စေရန်၊ ခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်စေရန်၊ စည်းကမ်းရှိစေရန် စသည်တို့ကို စံနစ်တကျ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် လိုပေသည်။ 
ခွေးများ စားတတ်သည်နှင့် မစားတတ်သည့် အစာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ပဲစိမ်း (Green beans)
အာလူး (အခွံခွာပြီး ပြုတ်ထားသော)
သစ်တောက်စေ့ (Macadamia nuts)
အသီးမှ ရသော အစေ့အဆံများ
ဆား မတရားငန်သော အစာများ
တဆေးနှင့် မုန့်ခြောက် (Dough)
ပေါင် ၂၀ သို့မဟုတ် အောက်လျော့နည်းသော ခွေးများ ၂၁ ပေါင်မှ ပေါင် ၅၀ ထိ ခွေးများ ပေါင် ၅၀ ထက် ကြီးသော ခွေးများ
လူသက်တမ်းဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရောက်ရှိနေသည့် အသက်များ
၁ ၁၅ ၁၅ ၁၅
၂ ၂၄ ၂၄ ၂၄
၃ ၂၈ ၂၈ ၂၈
၄ ၃၂ ၃၂ ၃၂
၅ ၃၆ ၃၆ ၃၆
၆ ၄၀ ၄၂ ၄၅
၇ ၄၄ ၄၇ ၅၀
၈ ၄၈ ၅၁ ၅၅
၉ ၅၂ ၅၆ ၆၁
၁၀ ၅၆ ၆၀ ၆၆
၁၁ ၆၀ ၆၅ ၇၂
၁၂ ၆၄ ၆၉ ၇၇
၁၃ ၆၈ ၇၄ ၈၂
၁၄ ၇၂ ၇၈ ၈၈
၁၅ ၇၆ ၈၃ ၉၃
၁၆ ၈၀ ၈၇ ၁၂၀
↑ "How Much Is That in Dog Years? The Advent of Canine Population Genomics" (2014). PLOS Genetics 10 (1): e1004093. doi:10.1371/journal.pgen.1004093. PMID 24453989.
↑ "A wolf in dog's clothing: Initial dog domestication and Pleistocene wolf variation" (2016). Journal of Archaeological Science 68: 1. doi:10.1016/j.jas.2016.02.003.
↑ Cosmos: A Spacetime Odyssey 2014
↑ 35 Healthy Dinner Recipes Ready in 30 Minutes | Infographic, Dog and Food
↑ Your Dog's Age In Human Years: A Conversion Chart | Year calculator, Dog years and Calculator
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခွေး&oldid=715384" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။